IATO yenza ubuso ngobuso noRhulumente wase-India
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo » IATO yenza ubuso ngobuso noRhulumente wase-India
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo • iindaba • Ukwakha kwakhona • Tourism • Intetho yezoKhenketho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba ezahlukeneyo
Abaphathiswa be-IATO badibana noMphathiswa Wezemali
Namhlanje, Mnu. Rajiv Mehra, Mongameli, kunye noMnu Pronab Sarkar, uMongameli owadlulayo, we-Indian Association of Tour Operators (IATO), iqumrhu lesizwe labaqhubi bezokhenketho, wabiza u-Hon. Umphathiswa Wezemali, Nksz Nirmala Sitharaman, kwi-ofisi yakhe.
Abameli be-IATO badibana ukumbulela ngokususa iiNkonzo zokuThumela kwelinye ilizwe kwi-India Scheme (SEIS) kubaboneleli beenkonzo.
Ukongeza, bambulela ngee-5 zamawaka zeeVisa zasimahla kubakhenkethi bamanye amazwe, nangokunika imali mboleko kunye nokufuna inkxaso engaphezulu kurhulumente wokuvuselela ezokhenketho nokusombulula imicimbi engekenziwa.
Oku kuya kunceda kakhulu abaqhubi bezokhenketho baseIndiya ukuba bakhuphisane namazwe angabamelwane ekutsaleni abakhenkethi abaninzi eIndiya.
Imiba ephakanyiswe kunye ne-Hon. UMphathiswa wayezakugcina iipesenti ze-SEIS zeepesenti ze-7 zeepesenti ezinikwe abaqhubi bezokhenketho kwiminyaka embalwa edlulileyo. Bakhankanye ukuba i-IATO ibicela ukonyusa ipesenti ukuya kwiipesenti ezili-10, kwaye kufuneka igcinwe kwiipesenti ezisi-7 ukuba ayinakonyuswa. Bakwathi akufuneki kubekho naziphi na i-capping, kwaye i-SEIS kubaqhubi babakhenkethi kufuneka bakhululwe ngaphandle kokulalanisa kwipesenti.
Baye baxoxa noMongameli. Umphathiswa isiphumo sokulahleka kwempahla kunye neenkonzo zerhafu (GST) kubaqhubi bezokhenketho kwaye wacela ukuba asuse oku kungagunyazisiyo ngokubiza i-GST kwixabiso elibonwayo elinokuba yipesenti ye-10 yetyala elipheleleyo labaqhubi bezokhenketho. Oku kuyakuvumela ukuba inkonzo irhafiswe ngepesenti ye-18 nge-10 yepesenti yokumakisha, okuthetha ukuba inqanaba elisebenzayo le-GST kwiindleko ezipheleleyo zepakethe liza kusebenza kwiipesenti eziyi-1.8 zokuhlawulwa kwemali yomqhubi kubakhenkethi bakhe ngaphandle kokufaka Ityala lerhafu (ITC). Kwaye kwacelwa ukuba i-GST kunye neZinto eziHlanganisiweyo kunye neNkonzo yeRhafu (IGST) zikhululwe ngokupheleleyo kwiinkonzo ezinikezelwa ngaphandle kwe-India, okt, kumazwe angabamelwane nokuba iphakheji ibandakanya Ukhenketho lwaseIndiya, njengoko oku kubangela ukulahleka kweshishini kubaqhubi bezokhenketho. Ngenxa yokuxolelwa ekuhlawuleni irhafu, ukubhukisha kuya kuza kubakhenkethi eIndiya endaweni yokubhukisha kubathengisi abakumazwe aselumelwaneni. Oku kuyakongeza utshintsho olukhulu lwangaphandle kwilizwe.
Omnye umba owathathwayo yayikukuhlawuliswa koQokelelo lweRhafu kuMthombo (TCS) kwintengiso yeephakeji zokhenketho zaphesheya. Kwacelwa ukuba i-TCS mayingasebenzi kubantu okanye kwiinkampani ezingezizo ezabemi bamanye amazwe, abakhenkethi, okanye abaqhubi babakhenkethi bamanye amazwe ababekwe ngaphandle kwe-India ngokuthenga iiphakheji zokhenketho Umqhubi wezokhenketho waseIndiya ngaphandle kweIndiya.